अब स्मार्ट प्रतिक्षालयमा मोवाईल चार्ज गर्दै फ्रि वाईफाई चलाएर कुर्नुस काठमाडौंका बस ! - LaltinKhabar
अब स्मार्ट प्रतिक्षालयमा मोवाईल चार्ज गर्दै फ्रि वाईफाई चलाएर कुर्नुस काठमाडौंका बस !
काठमाडौं । शान्तिकाटिका अगााडी सडक बिचमा सँधै जसो एउटा लाईन लागेको हुन्छ । त्यो लाईन न त कुनै जागीर को आबेदन दिन हो न त कुनै सेवाको महसुल बुझाउन या फारम भर्न नै । तर त्यो लाईन के को लागी हो कौतुहलता त्यतीबेला सकिन्छ जतिबेला सार्र्बजनिक यातायात त्यहाँ आर्ईपुग्छन र ती यात्रु लामबद्ध भएर सवारीमा प्रवेश गर्दछन । पहिलो पटक देख्ने जो कोहिलाई पनि अनौठो लाग्ने यो लाईन हो उपत्यकाका बिभिन्न स्थानमा पुग्ने यात्रुहरुले सवारी साधन चढ्न प्रयोग गनुपर्ने नियम । यात्रु प्रतिक्षालय अभाबमा सर्बसाधारणले यसरी नै लामो समय सम्म सडक बिचमा उभिएर सार्वजनिक यातायात कुनुपर्ने बाध्यता छ ।
यस्तो समस्या काठमांडौका अधिकांश स्थानमा रहेका छन । राजधानीमा रहेका अधिकांश स्थानमा यात्रु प्रतिक्षालय नहुँदा तथा पर्याप्त मात्रामा नहुँदा सडकछेउ र फुटपाथमा बसेर सवारी प्रतिक्षा गनुपर्ने सर्बसाधारणको बाध्यता छ ।
अव यो बाध्यता छिट्टै हट्ने भएको छ । यसै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै काठमांडौं महानगरपालिकाले उपत्यकाका बिभिन्न स्थानमा प्रतिक्षालय बनाउने भएको छ । त्यो पनि स्मार्ट यात्रु प्रतिक्षालय महानगरले सार्बजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई लक्षित गरी यस्ता प्रतिक्षालय स्थापना गर्न लागेको हो । बिभिन्न रुट हुँदै महानगरभर पुग्ने सवारीसाधन कुर्न र सवारीबारे जानकारी लिन अब यस्तो समस्या रहने छैन ।
महानगरका अनुसार सार्वजनिक यातायात कुर्नका लागि यात्रुहरुले बचि सडकमा सास्ती भोग्नु पर्दैन । स्मार्ट प्रक्षिलयमा बसेर महानगरल उपलब्ध गराउने फ्रि बाईफाईकोे उपयोग गर्दै,मोवाईल चार्ज गर्दै आफु जाने रुटको सवारी कहाँ आईपुग्यो,कति समय लाग्छ र कहाँबाट बस सवारी लाग्छ सम्पूर्ण जानकार िलिँदै स्मार्ट प्रतिक्षालयमा कुर्न सक्नुहुनेछ ।
आकर्षकका साथै अत्याधुनिक प्रकृतिका यस्ता प्रतिक्षालय स्थापना गर्न भन्दै महानगरल २८ औँ बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको नेतृत्वमा सम्भाव्यता अध्ययनदेखि स्थापना सम्मको अधिकार रहनेगरी वडा नम्वर १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल र वडा नम्वर १८ का अध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जन सदस्य रहेको अधिकार सम्पन्न सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ । त्यस्त स्थलगत अध्ययनमा लागि कमिटी सदस्य न्हुच्छेकाजी महर्जनको संयोजकत्कमा कर्मचारी सम्मिलित अर्को उप–समिति समेत गठन भएको छ महानगर क्षेत्रमा बिभिन्न स्थानमा सम्भाब्यता अध्ययन गरी यी समितीहरुल सिफारीस गरेका स्थानमा यस्ता प्रतिक्षालय बन्ने महानगरका प्रवत्ता एवम समिती सदस्य ईश्वरमान डंगोलले जनाएका छन । उनका अनुसार प्रतीक्षालयमा यात्रुको सहजताका लागि विभिन्न सुविधाको व्यवस्था हुनेछन
। यस्ता प्रतिक्षालयमा स्मार्ट डस्टविन,मोवाईलको चार्जिङ स्टेसन,घडी, सुचनामुलक जानकारी सहितका डिस्प्ले बोर्ड राखिनेछन जसले बिभिन्न जनचेतनामुलक सामग्रीका साथै केही बिज्ञापनजन्य सामग्री समेतलाई समाबेश गरीनेछन । यस्ताा प्रतिक्षालयमा जिपिएस ट्रयाकिङ मार्फत बिभिन्न सबारीका रुट र सवारी साधन कहाँ आईपुगे, कति समय लाग्नेछन लगाायतका जानकारी उपलब्ध गराउनेछ । यसबाट बिभिन्न प्रतिकुल मौसमका समउयमा समेत यात्रुले राहत पाउने भएका छन । सार्वजनिक निजि साझेदारीको अबधारणा अन्र्तगत बन्ने यस्ता स्मार्ट प्रतीक्षालयका सञ्चालनको जिम्मा एक निश्चित कम्पनीलाई दिईने छ ।
हाललाई ट्राफिक व्यबस्थापनका लागि प्रहरीले यात्रुलाई लाईन बसेर सवारी कुनुपर्ने बाध्यात्मक नियम बनाएको छ । भिड र अस्तव्यस्ततालाई नियञ्त्रण गर्न प्रहरीले यस्तो उपाय अपनाएको हो । तर लामो समयसम्म लाईन बस्नुपर्ने तथा सडकछेउ फुटपाथमै सवारी कुनुपर्ने अबस्थाले यात्रु मारमा परेको देखिन्छ । स्मार्ट प्रतीक्षालयको अबधारणा सmल भएको खण्डमा यसले सर्बसाधारणलाई धेरै मात्रामा राहत पुग्ने देखिन्छ ।